ပတ်ဘိုဂွံ - ဝီကီပီးဒီးယား
(1993-06-16) ဇွန် ၁၆၊ ၁၉၉၃ (အသက် ၂၈)
(Film and Musical Studies)
ပတ်ဘိုဂွံ (Korean: 박보검; ၁၆ ဇွန် ၁၉၉၃ မွေး) သည် တောင်ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင်တဦး ဖြစ်ပြီး Hello Monster(၂၀၁၅)၌ စိတ္တဇရှေ့နေအဖြစ်လည်းကောင်း၊ Reply 1988 (၂၀၁၅)၌ ဉာဏ်ကြီးရှင် ဂိုကစားသမားအဖြစ်လည်းကောင်း၊ Love in the Moonlight (၂၀၁၆)၌ ဂျိုဆွန်အိမ်ရှေ့စံအဖြစ်လည်းကောင်း ပြောင်မြောက်စွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်၍ ချီးမွမ်းမှု ခံရသည်။
ပတ်သည် ကေဘီအက်စ်မှ ချီးမြှင့်သော သရုပ်ဆောင်ထူးချွန်ဆုကို ရသည်သာမက အခြားဆုပေါင်းများစွာကိုလည်း ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ၌ Gallup Korea မှ တနှစ်တာ သရုပ်ဆောင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပြီး စစ်တမ်း၌ ပထမဆုံး ပါဝင်လာသော အငယ်ဆုံး သရုပ်ဆောင်ဖြစ်လာသည်။
၂.၁ 2011–2013: အစ
၂.၂ 2014–2015: လူကြိုက်များလာခြင်းနှင့် ချီးကျူးခံရခြင်း
၂.၃ 2016–present: Mainstream success
၄.၃ Variety show
၁၆ ဇွန် ၁၉၉၃ ဆိုးလ်၌ မွေးသော ပတ်သည် မွေးချင်းသုံးဦးအနက် အငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဘိုဂမ်(အသံဖလှယ်ခြင်းမှားနေပါက ပြင်ပေးပါ)ဟူသည်မှာ ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးက မှည့်ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ရတနာဓားဟူသတည်း။ သူ လေးတန်း၌ မိခင်ကွယ်လွန်သည်။ အသက်ငါးနှစ်နှင့် ပီယာနိုကို စတင်သင်ယူပြီး ဘုရားကျောင်း၌ ဓမ္မတေးအဖွဲ့ဝင်လည်း ဖြစ်သည်။ 
ဆိုးလ် မို့ဒုံအလယ်တန်းကျောင်းရေကူးအသင်း၌ ပါသည်။ အထက်တန်းဒုတိယနှစ်တွင် ထင်ရှားသော တေးလင့်အေဂျင်စီများသို့ ပီယာနိုကိုယ်တိုင်တီး၊ ကိုယ်တိုင်ဆိုထားသော ဗီဒီယိုကို ပို့ခဲ့ရာ၊ ကမ်းလှမ်းမှုများစွာ ရရှိသည်။မူလက အဆိုတော် သီချင်းရေးဆရာ ဖြစ်ချင်ခဲ့သော်လည်း၊ သရုပ်ဆောင်ပိုင်း၌ တော်လိမ့်မည်ဟူသော အကြံပြုချက်ကြောင့် သူ့အနုပညာလမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲသွားလေသည်။ ၂၀၁၂ ၌ ရှင်မို့အထက်တန်းကျောင်း အောင်ပြီးလျှင်၊ ၂၀၁၄ မတ်၌ မြောင်ဂျီတက္ကသိုလ်၏ ရုပ်ရှင်နှင့် တေးဂီတပညာ တက်ရောက်ရန် စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ နောက်တနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ကိုယ်စားပြု နိုင်ငံရပ်ခြားယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးအစီအစဉ်ဖြင့် အင်္ဂလန်၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီနှင့် ဆွစ်ဇာလန်ရှိ မြို့များသို့ ခရီးသွားခဲ့ရသည်။
သည်းထိတ်ရင်ဖို Blind (၂၀၁၁)၌ ဇာတ်ရံအဖြစ် Sidus HQ လက်အောက်မှ သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပွဲဦးထွက်လာသည်။  နောက်တွင် ပန်းပွင့်ဖျော်ဖြေရေးနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး အက်ရှင်ဟာသရုပ်ရှင် Runway Cop (၂၀၁၂)၊ Still Picture(၂၀၁၂)နှင့် Bridal Mask (၂၀၁၂)တို့၌ ပါခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ၌ ပလေးဘွိုင်း ဘေဂျုံးအို့ ဇာတ်ရုပ်ဖြင့် Wonderful Mama ၌ ပထမဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
2014–2015: လူကြိုက်များလာခြင်းနှင့် ချီးကျူးခံရခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၀၁၄ ၌ Wonderful Days တွင် လီဆိုးဂျင်၏ လူငယ်ဘဝအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဂျပန်မန်ဂကို မှီငြမ်းသော Cantabile Tomorrow ၌ လည်းကောင်း သရုပ်ဆောင်သည်။  ထို့ကြောင့် ကေဘီအက်စ်ရုပ်သံဆုပေးပွဲနှင့် APAN ကြယ်ပွင့်ဆုပေးပွဲတို့၌ အကောင်းဆုံးမျက်နှာသစ်သရုပ်ဆောင်ဆုကို လျာထားခံရသည်။
Atafan-signing event for Reply 1988, February 2016
ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်၌ ပြသပြီး ဝေဖန်မှုများစွာခံရသည့်အပြင် ဘုတ်ချိတ်သွားသော A Hard Day (၂၀၁၄)နှင့် သမိုင်းတလျှောက် အမြတ်အစွန်းအရဆုံး ကိုရီးယားရုပ်ရှင် ဖြစ်လာသည့် The Admiral: Roaring Currents (၂၀၁၄)၌ ပါဝင်ခဲ့သည်။ 
၂၀၁၅ မေ၌ Red Velvet ၏ အိုင်းရင်းနှင့် ပူးတွဲ၍ Music Bank ၌ တင်ဆက်သူလုပ်ရာ၊ သူတို့၏ အပေးအယူမျှ လိုက်ဖက်မှုစွမ်းရည်၊ အဆိုနှင့် တင်ဆက်ပုံတို့၌ပါ ပရိသတ်အာရုံစိုက်မှု ရရှိသည်။  သတင်းစာက ရှိုးပွဲ၏ ၁၈ နှစ်သမိုင်းအတွင်း အလိုက်ဖက်ဆုံး ပါတနာများထဲမှ တစုံတွဲဟု ခေါ်ဝေါ်ပြီး၊ ပတ်သည် ကေဘီအက်စ်ဖျော်ဖြေရေးဆုပေးပွဲ၌ အကောင်းဆုံးလူသစ်ဆုကို ရရှိသည်။ 
မှုခင်းဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်သော Hello Monster (၂၀၁၅)၌ သူ၏ တမူထူးခြားစွာ ကွဲထွက်နေသော ဇာတ်ရုပ်ကြောင့် ပရိသတ်များထံမှ လှိုက်လှဲသော အမြင်များနှင့် ဝေဖန်မှုများစွာ ရရှိခဲ့ပြီးလျှင်၊  နှစ်ကုန် ကေဘီအက်စ်ရုပ်သံဆုပေးပွဲ၌ လူကြိုက်များဆုနှင့် အကောင်းဆုံးဇာတ်ပို့ဆုကို ရရှိခဲ့လေသည်။  ထိုနှစ်၌ပင် ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်၌ ပြသသော လော့ကာကောက်ရမိန်းကလေး၌ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဇာတ်ရုပ်ပီပြင်မှုကြောင့် ပေဆန်အနုပညာဆုပေးပွဲ၌ အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်မျက်နှာသစ်ဆုအတွက် လျာထားခံရလေသည်။
ထို့နောက် အခပေးတီဗီ tvN ၏ လူသိများသော Reply စီးရီး၏ တတိယအကျော့၌ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ် ဆိုးလ်ကို အခြေတည်ထားပြီး၊ ဂိုကစားသမား ချွိုင်တက်အဖြစ် ပါခဲ့သည်။ ၎င်းစီးရီးကို ပရိသတ်က အဆင့် ၁၈.၈ ပေးကြရာ ကိုရီးယားအခပေးတီဗီသမိုင်း၌ အမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ပတ်သည် ကိုရီးယား၌သာ ကျော်ကြားသည်သာမက ထိပ်တန်းတရုတ်ဂီတဆုပေးပွဲက သူ့ကို အကောင်းဆုံး နိုင်ငံတကာအနုပညာဆုနှင့် ကိုရီးယားလှိုင်းကြယ်ပွင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်အခြေစိုက် DramaFever ဆုပေးပွဲ၌ အကောင်းဆုံး အလားအလာရှိ ကြယ်ပွင့်ဆုကို ပေးပြီး၊ tvN10 က အာရှကြယ်ပွင့်ဆုကို ပေးလေသည်။  ရီပလိုင်းတွင် အနုပညာထူးချွန်မှုကြောင့် အေပန် ကြယ်ပွင့်ဆုပေးပွဲ၌ အကောင်းဆုံး မျက်နှာသစ်ဆုရပြီး၊ ပေဆန်အနုပညာဆုပေးပွဲ၌ အိုင်ချိယီ ကမ္ဘာ့ကြယ်ပွင့်ဆုအတွက်မူ လျာထားခံရလေသည်။
2016–present: Mainstream success[ပြင်ဆင်ရန်]
At the press conference of Love in the Moonlight, August 2016
၂၀၁၆ အစ၌ tvN ၏ ခရီးသွားအစီအစဉ် Youth Over Flowers: Africa ၌ ပါဝင်ခဲ့သည်။ တူးဒေးအင်န်ဝမ်းနိုက်အစီအစဉ်၌ ဧည့်သည်အဖြစ် ပါရာ၊ ပရိသတ်မျှဝေမှု ၁၉.၉ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ရှိုးပွဲ၏ နှစ်နှစ်အတွင်း အမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက် ဖြစ်ခဲ့သည်။  မြူးဇစ်ဘဏ်၏ တင်ဆက်သူအဖြစ် တနှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီးနောက် ဇွန် ၂၀၁၆ ၌ ထွက်လိုက်သည်။
၂၀၁၆ ဩဂုတ်၌ လူငယ်ကြိုက် sageuk Love in the Moonlight ၌ ကင်ယူဂျောင်နှင့်အပြိုင်သရုပ်ဆောင်သည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ၌ လရောင်အောက်ကအချစ်(တိမ်ခြယ်လရောင်ဟုလည်း သိ)ဇာတ်လမ်းတွဲသည် ပရိသတ် ကြည့်ရှုနှုန်း ၂၃.၃ ရခဲ့သည်။ ၎င်းလူကြိုက်များမှုကို လရောင်ရောဂါလက္ခဏာဟု ခေါ်ကြပြီး၊ ပတ်၏ စွယ်စုံရအနုပညာကို မှတ်ကျောက်တင်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လရောင်၏ နောက်ခံသီချင်း ငါ့လူကို သူ၏ ပထမဆုံးသီဆိုထားသော သီချင်းအဖြစ် ဖြန့်ချိလိုက်ရာ၊ Melon, Mnet, Bugs, olleh, Soribada, Genie, Naver နှင့် Monkey3 တို့၏ ဇယား၌ ထိပ်စွဲလေပြီး၊ Gaon Music Chart ဇယား၌ အဆင့် ၃ ရလေသည်။
ထို့နောက် ၂၀၁၇ ထိ အရှေ့နှင့် အရှေ့တောင်အာရှဒေသများရှိ မြို့ရှစ်မြို့သို့ သွားရောက်၍ သူ၏ ပရိသတ်များနှင့် ပထမဆုံးတွေ့ဆုံသမှု ပြုလေသည်။
၂၀၁၆ ဇန်နဝါရီ၌ ဟယ်လိုမွန်းစတားဇာတ်လမ်းတွဲတွင် အတူသရုပ်ဆောင်သော မင်းသမီး ဂျန်နာရာနှင့် သတင်းထွက်ရာ၊ ဂျန်နာရာဘက်မှ ကောလာဟလဖြစ်ကြောင်း ဖြေရှင်းခဲ့ရသည်။
ဇန်နဝါရီ၌ ဆိုးလ်မြို့၌ ပထမဆုံးပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲလုပ်ရာ စာရင်းပေးသွင်းတက်ရောက်သူ များပြားခြင်းကြောင့် မူလသတ်မှတ်ထားသော လူ ၇၀၀ အစား လူ ၃၀၀၀ ဆန့် စတိတ်စင်သို့ အလျင်အမြန် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရလေသည်။
မျိုးဆက်သစ်　Hallyu　ကြယ်ပွင့်အဖြစ်　သတ်မှတ်ခံရသော　ပတ်သည်　ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမှာလည်း　ထူးချွန်လေသည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက သူ့ကို ကြင်နာတတ်၍ ယဉ်ကျေးပျူငှာသည်ဟု ဖော်ပြပြီး ကြော်ငြာရှင်များကမူ ကလေးဆန်၍ ယောက်ျားပီသသည်၊ တည်ငြိမ်၍　အဆင့်အတန်းမြင့်သည့်ပုံရိပ်ဖြစ်သည်၊ ဉာဏ်ကောင်း၍ အကောင်းမြင်တတ်သည်စသဖြင့် ချီးမွမ်းကြသည်။　 သူ့၏　တဟုန်ထိုးပေါက်ထွက်လာသော လွှမ်းမိုးမှုကို　ဘိုဂွံပြုစားမှုဟု အမွန်းတင်ပြီး　လရောင်ဇာတ်ကားပြီးနောက် နိုင်ငံ့အိမ်ရှေ့စံအဖြစ်　တင်စားကြလေသည်။ သားမက်တော်လိုခြင်း အခံရဆုံးသူအဖြစ်လည်း ပြည့်သားမက်ဟု ချစ်စနိုးခေါ်ကြလေသည်။
ပတ်သည်　ကိုရီးယားပြည်တွင်းပြည်ပ၌ ရှိသော　နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်အတော်များများကို　ကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်ပေးရသူ　ဖြစ်သည်။
2011 Blind မျက်ကန်း Min Dong-hyun
2012 Runway Cop ရဲပြေး young Cha Chul-soo
2014 A Hard Day ခက်တဲ့နေ့ Officer Lee Jin-ho
The Admiral: Roaring Currents Bae Soo-bong
Twinkle-Twinkle Pitter-Patter Jun-woo ကားတို
2015 Coin Locker Girl Park Seok-hyun
2012 Hero Kang Dong-woo OCN
Drama Special "Still Picture" young Kim Hyun-soo KBS2
Bridal Mask Han Min-kyu Ep. 26–28
Cantabile Tomorrow Lee Yoon-hoo
2015 The Producers Himself Ep.9ဧည့်သရုပ်ဆောင်
Hello Monster Jung Sun-ho/Lee Min
2015-2016 Reply 1988 Choi Taek tvN
2016 Love in the Moonlight Lee Yeong KBS2 
20152Days & 1 Night Season3KBS2 Ep. 103 cameo
2016 Youth Over Flowers: Africa tvN Cast member
Running Man SBS Ep. 293 cameo
Sister's Slam Dunk KBS2 Ep.2cameo
2 Days & 1 Night Season3Ep. 137, 138, 139 guest
2015 Forget You (Teaser) d.ear 
2015-2016 Music Bank KBS2 With Irene
2015 29th KBS Drama Awards With Jun Hyun-moo, Kim So-hyun
2016 KBS Song Festival With Seolhyun 
30th KBS Drama Awards With Jun Hyun-moo, Kim Ji-won 
"My Person (내 사람)"(ငါ့လူ)
January 16, 2016 ဆိုးလ် Our Exciting First Meeting KBS Arena 
April 23, 2016 ထိုင်ပေ
Close to U ထိုင်ပေနိုင်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ 
December 10, 2016 ကွာလာလမ်ပူ Oh Happy Day:
2016-2017 Asia Fan Meeting Tour
December 17, 2016 ဟောင်ကောင် AsiaWorld–Expo 
January 13, 2017 ဂျာကာတာ Kota Kasablanka
January 22, 2017 ထိုင်ပေ ထိုင်ဝမ်အမျိုးသားတက္ကသိုလ်အားကစားစင်တာ
February 4, 2017 တိုကျို တိုကျိုနိုင်ငံတကာဖိုရမ်
February 11, 2017 ဗန်ကောက် Thunder Dome, Muangthong Thani
February 18, 2017 စင်္ကာပူ The Star Performing Arts Center
2017 ဆိုးလ် TBA
2014 28th KBS Drama Awards Best New Actor Cantabile Tomorrow, Wonderful Days ဆန်ကာတင်
2015 4th APAN Star Awards Cantabile Tomorrow, Hello Monster ဆန်ကာတင်
14th KBS Entertainment Awards Best Newcomer Award Music Bank ဆုရရှိ
29th KBS Drama Awards Popularity Award, Actor Hello Monster ဆုရရှိ
Best Supporting Actor ဆုရရှိ
2016 InStyle Icons: Next Generation New Generation Actor Award N/A ဆုရရှိ 
11th Max Movie Awards Rising Star Award N/A ဆုရရှိ 
8th Style Icon Asia Style Icon N/A ဆုရရှိ 
16th Top Chinese Music Awards Best International Artist N/A ဆုရရှိ 
52nd Baeksang Arts Awards Best New Actor in Film Coin Locker Girl ဆန်ကာတင် 
Popularity Award in Film, Actor ဆန်ကာတင်
Popularity Award in TV, Actor Reply 1988 ဆန်ကာတင်
iQiyi Global Star Award N/A ဆန်ကာတင်
InStyle Fashion Award N/A ဆုရရှိ
4th Annual DramaFever Awards Best Rising Star Reply 1988 ဆုရရှိ 
Best Kiss (with Lee Hye-ri) ဆုရရှိ
5th APAN Star Awards Best New Actor ဆုရရှိ 
9th Korea Drama Awards Excellence Award, Actor Love in the Moonlight ဆန်ကာတင်
tvN10 Awards Made in tvN Actor, Drama Reply 1988 ဆန်ကာတင် 
Best Kiss (with Lee Hye-ri) ဆန်ကာတင်
Asia Star Award ဆုရရှိ
Asia Artist Awards Most Popular Actor N/A ဆန်ကာတင်
Asia Star Award, Actor Reply 1988, Love in the Moonlight ဆုရရှိ 
Best Star Award, Actor Love in the Moonlight ဆုရရှိ 
Melodi Awards Most Influential Korean Drama Personality N/A ဆုရရှိ 
OSEN Awards Star of the Year N/A ဆုရရှိ 
Yahoo! Asia Buzz Awards Asia Popular Artist Award N/A ဆန်ကာတင် 
SBS Cult Two Show Awards Most Mentioned N/A ဆုရရှိ 
30th KBS Drama Awards Grand Prize (Daesang) Love in the Moonlight ဆန်ကာတင် 
Top Excellence Award, Actor ဆုရရှိ
Excellence Award, Actor inaMid-length Drama ဆန်ကာတင်
Netizen Award, Actor ဆုရရှိ
Best Couple (with Kim Yoo-jung) ဆုရရှိ
Best Kiss (with Kim Yoo-jung) ဆုရရှိ
2nd Fashionista Awards Best Dresser of the Year N/A ဆုရရှိ 
2017 Korea Brand Awards Special Award N/A ဆုရရှိ 
↑ "'임금의 보배로운 검' 꿈꾸는 박보검 소개서"။
↑ [어저께TV '명단공개', '응팔'★들의 심상찮은 과거사]။
↑ "[인터뷰 박보검 "감사한 2015, 신중할 2016"]"။
↑ Video of Park Bo Gum Singing That Got Him Into Several Large Agencies Revealed။
↑ '내일도 칸타빌레' 박보검, 엉뚱발랄 첼리스트 화보။
↑ 박보검, 명랑소년 성장기(인터뷰)။
↑ Park Bo-gum: "명지대 14학번, 동기·선배들 연기력에 스스로 반성"။ 28 January 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 January 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Awakening the Centuries။
↑ Park Bo-gum: "I first wanted to beasinger..."။
↑ [TONG 시각장애인이 영화관에 가야 하는 이유 알려드릴까요?]။
↑ We are all guilty of falling in love with Park Bo-gum။
↑ [이은주 기자의 왜 떴을까 해맑은 미소로 힐링주는 ‘국민 남동생’ 박보검]။
↑ '식사' 배종옥 "박보검, 촬영 들어가기도 전에 눈물…막 울더라"။ 28 January 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 January 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 내일도 칸타빌레' 박보검, "女心 지휘하는 매력남"။
↑ 참좋은시절 이서진 아역 박보검, 훈훈한 외모에 사투리…"매력있어!"။
↑ ‘KBS연기대상’ 박보검, 어린왕자 패션+피아노 연주까지 ‘훈훈’။
↑ ‘2015 APAN STAR AWARDS‘။
↑ [무비:스포이트 김성훈 감독 "'끝까지 간다' 속 박보검, 무언가 있구나 느꼈죠"]။ 28 January 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 January 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 박보검, '뮤직뱅크' 새 MC 발탁…아이린과 호흡။
↑ [리폿@이슈 "송중기♥서효림→박보검♥아이린"…'뮤뱅' 역대 커플 MC]။
↑ 'KBS 연예대상' 설현 박보검 이재윤, 남녀 신인상 수상။
↑ 종영 ‘너를기억해’ 박보검이라는 배우의 발견။
↑ '대세' 박보검, 조연상 이어 인기상 '2관왕'(KBS 연기대상)။
↑ '차이나타운' 김고은-박보검, "풋풋해~" 보기만 해도 설레는 커플 화보 공개!။
↑ ‘백상예술대상’ 고경표-박보검-박서준-박정민-태인호, 일생 단 한 번뿐인 男 신인상은 누구에게။
↑ [tvN10어워즈 박보검, 영상통화 성공…tvN아시아상 수상]။
↑ 박보검, ‘APAN' 신인상에 "불허한다 내상이다"…매력 발산။
↑ 박보검 측 "류준열·안재홍·고경표와 '꽃청춘' 합류"(공식입장)။
↑ '1박2일' 박보검 효과 톡톡히, 시청률 19.9%…'2년 만에 자체 최고 시청률'။
↑ 박보검·아이린, '뮤직뱅크' MC 하차(공식입장)။
↑ [SW이슈 박보검, '구르미'로 증명한 배우로서의 가치]။
↑ 'Love in the Moonlight' tops 20 percent in viewership။
↑ (News Focus) 'Love in the Moonlight' shines through unexpected success။
↑ Park Bo-gum interview pt. 1: ‘Moonlight Drawn by Clouds’။
↑ Park Bo-gum interview pt. 2: Celebrity life။
↑ 박보검 '욘사마 열풍' 현…50~70대 여성 팬들 열광။
↑ 박보검 '내사람', 7개차트 1위 맹공…아이돌급 인기။
↑ ‘Love in the Moonlight’ ranks first among Korean dramas။2October 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 January 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ [SC초점 '태후'→'구르미'로 본 성공법칙, #엔딩5분#박보검#송중기]။
↑ "박보검, 못하는게 뭐니" OST까지 1위…'내 사람' 음원 차트 '올킬'။
↑ Actor Park Bo-gum embarks on Asia tour။
↑ Don’t know Park Bo-gum? Well, you should။ 28 January 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 January 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Squeaky clean image wins over public။
↑ Reply1988 Park Bo-gum, I didn't do any plastic surgery! No alcohol, cigarette, swearing။
↑ 박보검, 중국판 그래미서 한국 배우 최초 수상 ‘한류 날개’။
↑ [SS톡 박보검, 소리 없이 선한 영향력 실천 중인 '국민 선행남']။
↑ Actor Park Bo-gum wins 'older' women's hearts။
↑ Korea caught in 'Bo-gum magic'။
↑ Park Bogum captivates fans from pre-teens to grandmas... reminiscent of 'Yonsama syndrome'။
↑ 박보검, '2016 아시아 투어 팬미팅' 개최။[လင့်ခ်သေ]
↑ 박보검, 출구없는 매력발산…‘심쿵’하는 강렬한 눈빛 [화보]။
↑ 스텔라장, 박보검·김연아 로맨틱 광고송 주인공။ 22 October 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 January 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 송중기 박보검 나란히 광고모델, 대세 배우의 훈훈한 투샷။
↑ Park Bo-gum earns 40 Billion Won from CFs for 2016။
↑ Actor Park Bo-gum to take on period drama after 'Reply 1988'။
↑ D.ear - Forget You Teaser 1(박보검)။
↑ Park Bo-gum to host "KBS Song Festival"။
↑ Park Bo-gum and Jun Hyun-moo to host 2016 KBS Drama Awards။
↑ Cumulative sales for "My Person":
↑ Gaon Digital Chart (in Korean)။ Gaon Chart။ Korea Music Content Industry Association။ October 20, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Park Bo-gum sheds tears at fan meeting။
↑ Park Bo-gum meets Taiwan fans။
↑ Park Bo-gum's Fun and Touching Fan Meeting in Kuala Lumpur။
↑ Park Bo-gum Meets 4000 fans in Hong Kong။
↑ InStyle Icons:Next Generation။ 13 March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 January 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Max Movie: 2016 Rising Stars Award။
↑ 'SIA' 스타일아이콘 10인 공개, 'G-Dragon, 리이펑, 박보검, 소녀시대, 송승헌, 송중기, 유아인, 이정재, 이하늬, 하지원'။
↑ 박보검 음악풍운방연도 시상식서 아티스트상 수상..中 인기도 여전해။
↑ Male Rookie Actor Nomination။7September 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 January 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2016 한류팬이 뽑은 최고의 배우는 지성-박보영။
↑ APAN Star Awards။
↑ "박보검VS조진웅"…tvN10 어워즈, 화려한 수상 후보 공개။
↑ Park Bo-gum wins Asia Star Award for "Reply" and "Moonlight"။
↑ Park Bogum and Suzy win Best Star Awards။
↑ Winners of 3rd Melodi Awards။ 20 December 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 January 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Park Bo-gum Hailed by Actors and Industry Representatives as "Star of the Year" for 1st OSEN Awards။
↑ Yahoo! Asia Buzz Awards။ 27 November 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 January 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ‘컬투쇼’ 박보검, 출연 없이 ‘최다 언급상’ 수상…홍경민 "박보검 父와 밥 먹었다" [출처 비]။
↑ KBS Daesang Nominees: Park Shin-yang, Song Hye-kyo, Song Joong-ki and Park Bo-gum။
↑ Top Excellence Award Winners at KBS Drama Awards။
↑ 2016 KBS Drama Awards Winners။
↑ Interview with Best Dresser of the Year Park Bo-gum။
↑ 박보검·조정석, 2017년 기대되는 브랜드 선정။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပတ်ဘိုဂွံ&oldid=743660" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၀:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။